डा. भट्टराई भन्छन्, खै किन उहाँहरुले कुरा बुझ्नु भएन
निशान न्युज श्रावण ९, 2074
काठमाडौं । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग एकता गर्न लामो समयसम्म कसरत गरेका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले आफुले चाहेर पनि एकता हुन नसकेकोमा दुःख मनाउ गरेका छन् । उनले आफ्नो कारणले भन्दा पनि संघीय समाजवादी फोरम कै कारण त्काल एकता टरेको भन्दै सच...
चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने राप्रपाले ...
श्रावण ९, 2074 पोखरा । भनिन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको धनी वर्गको पार्टी हो । राजावादी पार्टी भएकाले यसलाई पैसाको कुनै खाँचो हुँदैन भनिन्छ । तर, लम्जुङमा भने पार्टी कार्यालयको भाडा तिर्न नसकेर सबैका सामु बेइज्जत मात्रै भएको छैन...
महिलालाई उपप्रधानमन्त्री र उप–सभापति ...
श्रावण ९, 2074 काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले पार्टीभित्र महिलालाई पनि उपप्रधानमन्त्री र उपसभापति दिनुपर्ने बताएकी छन् । उनले संविधानले उल्लेख गरे बमोजिम महिलाहरुलाई हरेक निकायमा सम्मानजनक उपस्थिति गराउनुपर्ने बताइन्...
प्रचण्ड गुहार्ने बाबुराम, बाबुराम गुह...
श्रावण ८, 2074 काठमाडौं । एकीकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्र विक्रम चन्द र मोहन वैद्यलाई पार्टी एकता गर्न अपिल गरिरहेका बेला डा. बाबुराम भट्टराई भने पार्टी एकताका लागि उपेन्द्र यादवलाई हा...
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको ढिलाइबारे संस...
श्रावण ८, 2074 काठमाडौँ, । व्यवस्थापिका– संसद्को आजको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा भएको ढिलाइबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गर्न माग भएको छ । बैठकको विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसक...
काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी
श्रावण ८, 2074 काठमाडौँ, । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा समसामयिक राजनीति र स्थानीय निर्वाचनको समीक्षालगायत विषयमा छलफल जारी छ । बैठकमा हालै सम्पन्न २ चरणका स्थानीय निर्वाचनमा भएका कमजोरीको समीक्षा ...
काँग्रेसका ६ कार्यकर्ता कारबाहीमा
श्रावण ८, 2074 पोखरा, । नेपाली काँग्रेस कास्की क्षेत्र नं ४ ले ६ जनालाई कारबाही गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागी उम्मेदवार, ३ का प्रस्तावक, समर्थक र प्रचारप्रसार समितिमा रहेर काम गरेकामा उनीहरुलाई कारबाही गरिएको समितिका सभापति पोषन...
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ...
श्रावण ७, 2074 काठमाडौँ, । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा शुरु भएको छ । पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा समसामयिक राजनीतिक र स्थानीय तहको २...
फकाउलान् त काजी साबले राणा साबलाई ?
श्रावण ६, 2074 काठमाडौं । अहिलेसम्मको चौथौ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्काल विभाजनबाट रोकिएको छ । बुधबारदेखि बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकमा पार्टीभित्र देखा परेको विवाद समाधान गर्ने निर्णय भएसँगै तत्काल पार्टी विभाजन हुनबाट र...
संविधान खारेज गर्न शिवसेनाको माग
श्रावण ६, 2074 काठमाडौं । शिवसेना पार्टी अध्यक्ष बिक्रमबहादुर बमले जनभावना विपरीत बनेको संविधान खारेज गर्नुपर्ने दावी गरेका छन् । उनले अहिलेका राजनीतिक दलहरुले जनताले हिन्दु राज्य र राजसंस्था अंगालेको अवस्थामा जवरजस्ती परिवर्तन गरेकाले ...
अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्छाैं :...
श्रावण ५, 2074 काठमाडौँ, । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा पार्टीका विरुद्ध अन्तर्घात गर्नेलाई अनुशासन समिति बनाएर तत्काल कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं २ मा हुने स...
राप्रपा बैठक पुनः शुरु, किन गएनन् वर...
श्रावण ५, 2074 काठमाडौँ, । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बुधबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुरु भएको छ । बिहान ८ बजे शुरु गरिएको सो बैठकमा वरिष्ठ नेता पशुपति शम्शेर राणा पनि अनुपस्थित थिए । नयाँ बानेश्वरमा बुधबार शुरु भएको सो...
डेढ सय जना प्रवेश गरे माओवादीमा
श्रावण ४, 2074 ललितपुर । ललितपुरमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी सय भन्दा बढी कार्यकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । बुधबार बिहान ललितपुरको थासीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि गणेशबहादुर केसीस...
महासेठ भन्छन्, मधेशमा निर्वाचन एक हुन...
श्रावण ३, 2074 काठमाडौं । मधेशी मोर्चाले तेस्रो चरणको निर्वाचन हुनुअघि संविधान संशोधनको माग गरिरहेका बेला एमालेमा एक नेताले असोज २ भन्दा अघि कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन नहुने ठोकुवा गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रभ...
भरतपुर मुद्दाको सुनुवाइ मिति फेरी किन...
श्रावण २, 2074 काठमाडौं । पहिलो चरणमा चुनाव भएको चितवनको भरतपुर महानगरमा मतपत्र च्यातिएको मुद्दाको सुनुवाइ फेरि सरेको छ। पटक पटक सर्दै आएको मुद्दाको सोमबार न्यायाधीशद्व ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।आजको सुनुवाइमा...
← अघिल्लो 12… 165 166 167 168 169 170 171 172 173 … 179 180 पछिल्लो →